खसी, बोका, भेडा र च्याङ्ग्रा खानयोग्य कसरी चिन्ने ? – Dcnepal
खसी, बोका, भेडा र च्याङ्ग्रा खानयोग्य कसरी चिन्ने ?
प्रकाशित : २०७८ असोज २१ गते १७:४५
काठमाडौं । बिहीबारबाट काठमाडौँ महानगरका चौपाया बजारका खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्राको परीक्षण सुरु भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघ सरकारको पशुसेवा विभाग र बाग्मती प्रदेशको भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रसँग सहकार्य गरेर परीक्षण तथा अनुगमन थालेको हो ।